Misfit Shine 2 nambara tamin'ny bateria 6 volana sy jiro 12 | Androidsis
Misfit dia manambara ny Shine 2: motera hovitrovitra vaovao, manify kokoa ary misy jiro LED miloko
Manuel Ramirez | | About us, Fitaovana hafa
Roa taona lasa teo izay, i Misfit dia namoaka ilay fehin-tànana antsoina hoe Shine, iray amin'ireo fitafiana voalohany nahomby tamin'ny fanomezana safidy manintona ho an'ireo efa mpifaninana izay nanohana bebe kokoa ny plastika ho fitaovana lehibe indrindra amin'ny smartband. Hatramin'ny nanombohany io vokatra io, ny orinasa dia nanitatra ny elanelany mba hampidirana ireo karazana fitaovana rehetra, ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny torimaso sy ny jirony manokana.
Androany Misfit dia manambara ny fitaovana vaovaony, havaozina sy mahery vaika kokoa amin'ny lafiny rehetra, ny Shine 2. Ilay akanjo vaovao dia manisa ny fanaraha-maso ny torimaso sy ny firaketana ny hetsika ara-batana ataon'ny mpampiasa ary ny valiny azo hatsaraina mifandray. Ny iray amin'ireo lafiny lehibe indrindra dia ny ahatrehany ny Fiainana bateria 6 volana tahaka ny teo alohany tamin'ny vidiny $ 99.
1 Adinoy ny bateria
2 Mahazaka rano, mandray fampandrenesana an-tsoratra ...
Adinoy ny bateria
Eny any zavatra tena ilaina amin'ny fitafiana, dia ny fiainana bateria. Matetika isika manana finday avo lenta tsy mila manao na inona na inona isaky ny mitaky azy io, zavatra izay miova amin'ny brasele marani-tsaina izay tsy maintsy afatohintsika amin'ny tanana isaky ny nitaky azy io, ka arakaraka ny maha lehibe kokoa ny fizakantenany, ny fotoana vitsy ananantsika manala azy dia mametraka azy. Zavatra iray izay mety ho toa adaladala tamin'ny voalohany noho ny habetsaky ny fiasa azony omena antsika, fa amin'ny andro dia avelantsika hadino ao anaty vatasarihana birao io.
Alohan'ny hijerena ireo mampiavaka azy dia mahatsikaritra ny fiovana iray, saingy amin'ny fomba fijery hita maso, ary ny Shine 2 dia lehibe kokoa ny savaivony, saingy mahia noho ny teo aloha. Manana ampahany ratsy izy io, satria ny mpampiasa ny Shine vaovao dia tsy afaka mampiasa ny kojakoja fanampiny amin'ny fitaovana vaovao raha toa ka mandeha amin'io fanavaozana io ihany izy ireo. Noho io antony io, ny Shine 2 dia zaraina amin'ny fehin-kibo fanatanjahan-tena, clasp ary clip.
Jiro LED 12 afaka mampiseho loko mihoatra ny 16 tapitrisa
Refy: 8 milimetatra, 3.3 mm eo anilany
Maharitra 6 volana ny fiainana bateria
Fametrahana ny vola azo takalo
Fanoherana rano hatramin'ny 50 metatra
Loko 2: volamena mena sy mainty
Vatan'ny modular sy aluminium
Fitaovana: tarika fanatanjahantena, brooch ary clip
Mahazaka rano, mandray fampandrenesana an-tsoratra ...
Mety raha manana ny Fehin-tànana Xiaomi Band ary tiako izany midira vokatra mitovy amin'izany fa amin'ny fanatsarana miharihary ny mampiavaka azy, ity Misfit Shine 2 ity no vokatra safidiana.
Ao anaty ny ao anatiny dia misy a processeur vaovao manome hery bebe kokoa eo anelanelan'ny fahatsapana rehetra, izay mamela anao hampiasa ireo jiro LED roa ambin'ny folo sy motera hovitrovitra ihany koa. Izy io koa dia misy magnetometre izay mandrefy ny fihodinan'ny fihodinana, izay manatsara ny fahamarinan'ny asa ara-batana sy ny fanaraha-maso ny torimaso.
endri-javatra Fanoherana rano 50 metatra, manana haingam-pandeha 3-axis izy ary valiny fanatsarana nihatsara noho io sensor capacitive io. Ankoatran'io fahaizany mandray an-tsoratra hetsika io dia mety misy ihany ny mahazo fampandrenesana an-tsoratra sy antso.
Manome antsipiriany ihany koa izahay momba ny fahafaha-manao ampiasao ny fampiharana Misfit Link, izay ahafahanao mamadika ny fitaovanao ho fanaraha-maso lavitra hanovana mozika, haka selfie na handefasana fitaovana manodidina ny trano.
Shine 2 dia ho hita $ 99,99 amin'ny loko roa ho an'ny volana Novambra any Etazonia. Ireo firenena sisa amin'ny volana desambra, mba hahafahanao manana izany daty voatondro izany hahazoana miditra amin'ny akanjo azo sarobidy tokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Misfit dia manambara ny Shine 2: motera hovitrovitra vaovao, manify kokoa ary misy jiro LED miloko
Google Photos dia mihoatra ny mpampiasa maherin'ny 100 tapitrisa
Huawei dia hanolotra saina vaovao alohan'ny faran'ny taona